Umsuka, ngokuba isitho ezibaluleke kakhulu, wenza eziningi imisebenzi ebalulekile futhi ngempela ahlukahlukene izici isakhiwo. Ngaphandle kwayo, ukuphila cishe isitshalo eziphilayo ngeke kwenzeke. Kulesi sihloko thina kuzoxoxwa ngokuningiliziwe fibrous uhlelo impande: kwezinye izitshalo sibangelwa, okuyinto has izici futhi kuyasiza eziphilayo ukuzivumelanisa njalo ezishintshashintshayo zendawo eziphila kuyo.
Impande komhlaba isitshalo isitho. Kusobala ukuthi izitshalo akusiyo sisebunyeni. Ngempela, bonke izimpande umzimba ziyahlukahluka ababukeka izici ukuthuthukiswa. Kunezinhlobo ezintathu izingxenye komhlaba isitshalo: main, ezilingene isesekeli. Ukuze uwahlukanise emiphongolweni. Impande eyinhloko simila ihlale ifana. Sigqamile ngobukhulu kanye nobude. It sikhule izimpande lateral. Abasakwazi eziningi. Futhi uma izimpande zikhule ngokuqondile ekuphunyukeni kuzo, zingabantu okhonzile.
Ngaphandle izimpande zalesi sihlahla ozokufa, ngoba umsebenzi wayo kubalulekile ngempela. Okokuqala, it is ngibopha eziphilayo ezitholakala enhlabathini, ukuhlinzeka umsoco amaminerali nokusukuma amanzi wamanje. Uma kudingeka, izitshalo eziningi zakha ukuguqulwa impande. Ngokwesibonelo, u-beetroot, izaqathe kanye radishes yakha izimpande. Lokhu ukuqina impande main. Bona ukuqoqa amanzi kanye nokuhlinzekwa izinto ezidingekayo ukuze ithole izimo ezingezinhle.
Izinhlobo impande izinhlelo
Kuyakuba khona impande uhlobo olulodwa lwesitshalo akwanele. Phela, ukusebenza komzimba kuncike empilweni wonke umzimba. Ngakho-ke izinhlelo isitshalo impande akhiwa, ehlanganisa izinhlobo eziningana izitho ngomshoshaphansi. Ziyakwazi iyashelela. Izinhlobo ezinkulu impande izinhlelo - induku fibrous. Umehluko omkhulu itholakala nokwakheka singularities. Ngokwesibonelo, fibrous uhlelo impande incane esikhathini sokungena ukujula, nenduku, kunalokho, ivumela izitshalo ukuthola amanzi kusukela nasekujuleni kwamanzi.
Thinta uhlelo impande
kakhulu Igama lesi sakhiwo libhekene timphawu tesakhiwo yayo. It has a Taproot evelele. Lolu hlelo Thepha impande kuhlukile fibrous. Ngenxa yalokhu izitshalo kokuba lesi sakhiwo, bakwazi ukukhipha amanzi zamashumi eziningana amamitha ukujula. Kusukela main impande ehlukana uhlangothi, okwandisa ebusweni ukuncela.
Isakhiwo fibrous uhlelo impande
Fibrous uhlelo impande siqukethe izimpande uhlobo olufanayo - paranasal. Zikhula ngokuqondile izingxenye zasemoyeni simila, ngakho-ke, akha umqulu. Ngokuvamile bangabaphingi bonke ubude obufanayo. Futhi impande main ekuthuthukiseni ekuseni namanje likhula. Nokho, kamuva uyafa. Ngenxa yalokho, kukhona kuphela labo izimpande ezikhula kusukela beqa. ugodo njalo is ezimweni eziningi ezinamandla ngempela. Zama ungamumbi izandla ukolweni wakhe isitshalo inhlabathi ezimanzi - uzobona ukuthi lokhu kubalulekile ukusebenzisa amandla eside. Ngezinye izikhathi izimpande adventitious angagcina uhlangothi, elibuye kwandisa ububanzi elalihlala uhlelo.
Yini izitshalo babe fibrous uhlelo impande
Ngo ukuvela kulesi sakhiwo livela kwabamele kokuqala izitshalo spore ephakeme - Fern, moss futhi horsetails. Kungoba iningi labo abamelelwa umzimba ukuguqulwa komhlaba indlela yokuphunyuka, okungukuthi Rhizome sikhule izimpande adventitious ezivela kuye. Lena isinyathelo esikhulu phambili esikhathini phylogeny zezitshalo eziphilayo njengoba ulwelwe nezinye abameleli spore kwadingeka kuphela rhizoids. Letakhi nje kuphela lendwangu axube umsebenzi substrate.
It has a fibrous uhlelo impande nazo zonke izitshalo okungokwendlela Monocotyledons ekilasini. Kanye ukungabi khona cambium, arc, noma parallel-enemigqa emihle inezinhlobonhlobo zemibala izimpawu nezinye, kuyisici sobuntu yabo ehlelekile. Lesi sigaba imelelwa imikhaya eminingana. Ngokwesibonelo, liliaceae Onion kwakhiwa futhi ukuguqulwa Ukuphunyuka isici. Lokhu uqweqwe stem komhlaba, lapho amanzi lilondolozwe, nayo yonke namaminerali adingekayo. Ibizwa ngokuthi isibani. Kusukela futhi sikhule tufts izimpande adventitious. Ilayisi, ukolweni, ummbila, i-rye, nebhali kukhona abamele Okusanhlamvu umndeni. Babuye libhekene fibrous uhlelo impande. Izibonelo isakhiwo - liphinde Dahlia, asparagus, ubhatata, CHISTYAKOV. izimpande zabo adventitious kakhulu uqweqwe futhi babe ukuma tuberous. Futhi buthelela izakhamzimba. Izinguquko ezinjalo, ngakho abizwa ngokuthi impande nezilimo eziyizigaxa. Ukusekelwa, ukuphefumula, sucker futhi slinging futhi sikhule kusukela oluphunyukile. Ngakho-ke, ungase futhi kubhekwe vidozmeneniem fibrous uhlelo impande. Ngokwesibonelo, ungakwazi ukhule kusetshenziswa izimpande Creeper-pritsepok ngisho phezu mpo. Futhi orchid ungamunca umswakama kusukela emoyeni. Lokhu kufezwa ngezinkathi zezikhathi ngokuphefumula izimpande adventitious. kwakhiwa ukuguqulwa okukhulu emmbileni. Lokhu izimpande ukwesekwa. Bona azungeze Ezansi stem futhi ukusekela yokuphunyuka enamandla kusuka ezisindayo izithelo-ihleza.
Emihle nemibi fibrous uhlelo impande
Fibrous uhlelo impande izitshalo ukuthi akudingeki ukuba ukukhiqiza umswakama kumuntu ukujula eside. Lokho amasethi pretty okuningi ihluke kwezinye isakhiwo esifanayo - ekujuleni kwenhliziyo. It is ithuthukiswe kahle Taproot akwazi ukungena amashumi amamitha ezijulile enhlabathini. Lesi sici nobuntu zonke class of dicotyledons. Kodwa fibrous uhlelo impande futhi kunezinzuzo. Ngokwesibonelo, ikwazi ukuba luthathe indawo enkulu, okwandisa ebusweni ukuncela. Ngo kakolweni uhlelo impande fibrous kuthatha ububanzi 126 cm ubude uphawu 120. Ukuthuthukiswa lesi sakhiwo uncike ngokuphelele phezu zezemvelo. Ngo inhlabathi okuxekethile ezivela corn angakhula izimpande adventitious endaweni engaba 2 m, apula kuya ku-15 noma ngaphezulu. Ngesikhathi esifanayo, futhi sokungena ukujula kuyaphawuleka ngempela. Ezinye ukhula, ifinyelela 6 m. Ngakho-ke, kuzo ezinzima ngakho ukuqeda. Uma umhlabathi esindayo, futhi okuqukethwe oxygen akwanele, cishe zonke izimpande adventitious ku ubuso bayo ungqimba.
Ngakho, fibrous uhlelo impande enezinto eziningi izici ezivelele. Kuyinto ejwayelekile ye izitshalo ekilasini Monocotyledons: umndeni okusanhlamvu, onion Liliaceae. Lesi sakhiwo siqukethe izimpande adventitious ezimila ukuba baphume ugongolo, bangazihluphi indawo enkulu.
Bhala indaba ekhuluma "Abangane bami"
Imvelo kule lyric Lermontov. I motif nemvelo lyric Lermontov sika
Kuyini polyurethane kuphawuleka kakhulu amakhondomu?
Lotus ukuma uthulisa isimiso sezinzwa!
Ungamema kanjani intombazane ukuba ihambe? Funda kangcono ngaphambi kokuhlangana
Komholo eSwitzerland ngo-Euro
Tartar of herring: ukulungiselela elula!